စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအား ပြည်တွင်းပစ္စည်း ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းတို့ အတ? - Yangon Media Group
လာမည့်ဇူလိုင် ၁ ရက်မှစတင်၍ ပြည်တွင်းပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေး စေခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက် ပေးစေခြင်းတို့အတွက် ပင်ရင်းမှ နုတ်ယူပေးသွင်းသည့် (ဝင်ငွေခွန်ကိုကြိုတင်ကောက်ခံသည့်)အခွန် (Withholding Tax)ကို ကောက် ခံမည်မဟုတ်ကြောင်း စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဇွန် ၁၈ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် နိုင်ငံတော်နှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစုစပ်လုပ်ငန်း၊ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်သည့်လုပ်ငန်း၊ ကုမ္ပဏီ၊ တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ စုပေါင်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်း၊ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ မှတ်ပုံတင်၍ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့မဟုတ်) အသင်းအဖွဲ့၊ သမဝါယမအသင်းနှင့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံခြားသားပိုင်လုပ်ငန်းများက ကန်ထရိုက်စာချုပ် (သို့မဟုတ်) သဘောတူစာချုပ် (သို့မဟုတ်) အ ခြားစနစ်တစ်ခုခုဖြင့် နိုင်ငံတော်အတွင်း ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ပေးစေခြင်းတို့အတွက် ပေးချေငွေများကို ထုတ်ပေးသည့်ငွေမှ အခွန်အတွက်နုတ်ယူ ရန်ရာခိုင်နှုန်းမှာ ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသားများအနေ ဖြင့် ပေးသွင်းရန်မလိုပဲ ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသားအတွက် ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီးအတိုး ပေးငွေများအတွက် ထုတ်ပေးသည့်ငွေမှ အခွန်အတွက် နုတ်ယူရန်ရာခိုင်နှုန်းမှာ ပြည် တွင်းနေနိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသားများအနေဖြင့် ပေးသွင်းရန်မလိုပဲ ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသားအတွက် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း ပေးသွင်း ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက” Withholding Tax ကို ပြည်တွင်း ဝယ်ယူမှုတွေ၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ငှားရမ်းခတွေအပေါ်မှာ ကောက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကို ကြေညာပေးခဲ့ပါပြီ”ဟု ဇွန် ၁၉ ရက်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။ ယင်းအပြင်ဝင်ငွေခွန်ကို ကြိုတင်ကောက်ခံသည့်ပင်ရင်းမှ နုတ်ယူပေးသွင်း သည့်အခွန် (Withholding Tax)နှင့်ပတ်သက်၍ လိုင်စင်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ မူပိုင်အခွင့်အရေး စသည်တို့ကို အသုံးချခွင့်ပြုသည့်အတွက် ပေး ချေငွေများကိုထုတ်ပေးသည့်ငွေမှ အခွန်အတွက်နုတ်ယူရန် ရာခိုင်နှုန်းမှာ ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသားများအနေဖြင့် ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်း၊ ပြည်ပနေ နိုင်ငံ ခြားသားအတွက် ၁၅ ရာခိုင် နှုန်းပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ပြည် ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ၊ နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများ၊ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များက တင်ဒါစနစ် (သို့မဟုတ်) လေလံစနစ် (သို့မဟုတ်) ဈေးပြိုင်ခေါ်ယူသည့်စနစ် (သို့မဟုတ်) ကန်ထရိုက်စာချုပ် (သို့မဟုတ်) သဘောတူစာချုပ် (သို့မဟုတ်) အခြားစနစ်တစ်ခုခုဖြင့် နိုင်ငံတော်အတွင်း ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေး စေခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက် ပေးစေခြင်းတို့အတွက် ပေးချေ ငွေများမှအခွန်နုတ်ယူပေးသွင်းရာတွင်နှစ်တစ်နှစ်အတွင်းစုစု ပေါင်းပေးချေငွေကျပ်၁ဝသိန်းအ ထိအခွန်နုတ်ယူပေးသွင်းခြင်းမ ပြုစေဘဲစုစုပေါင်းပေးချေငွေသည်ကျပ်၁ဝသိန်းအထက်ကျော်လွန်ပါကပေးချေငွေများကိုထုတ်ပေးသည့်ငွေမှ အခွန်အတွက်နုတ်ယူရန်ရာခိုင်နှုန်းမှာ ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသားများ အနေဖြင့် နှစ်ရာခိုင်နှုန်း၊ ပြည်ပ နေနိုင်ငံခြားသားအတွက် ၂ ဒသ မ ၅ ရာခိုင်နှုန်းပေးသွင်းရမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်
မြန်မာနိုင်ငံမော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချ ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာစိုးထွန်းက ”ဒါကိုကြိုဆိုပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ ပြီးတော့ SME လုပ်နေတဲ့အတွက်က Withholding Tax ကို မကောက်ခံတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့က လုပ်ငန်းရှင်အငယ်လေး တွေအတွက် SME လုပ်ငန်းရှင် တွေအတွက် အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြည်ပကသွင်းတဲ့ ပြည်ပကုမ္ပဏီတွေကတော့ ဆက်ပြီးပေးရမှာပေါ့နော်။ ဒါက ပြည်တွင်းအတွက်ကိုပဲ ဦးစားပေးတဲ့သဘော ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာလို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ အဓိကတော့ လက်လီလုပ်ငန်းငယ် လေးတွေအတွက် ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့”ဟုပြောသည်။ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် လစာ ခေါင်းစဉ်မှအပ ပေးချေငွေအမျိုး အစားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ငွေထုတ် ပေးရန်တာဝန်ရှိသူက ငွေထုတ် ပေးချိန်တွင် ရာခိုင်နှုန်းများအတိုင်း ကျသင့်သောဝင်ငွေခွန်ကို နုတ်ယူ ပေးသွင်းရန် ထုတ်ပြန်သတ်မှတ် ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဘာစီလိုနာ၏ ကမ်းလှမ်းမှုအား ငြင်းပယ်ပြီးနောက် ဂရေ့ဇ်မန်းကို အက်သလက်တီကို စာချုပ် သက်တမ်းတိ??
စပိန်နိုင်ငံ ဘာစီလိုနာ ဆန္ဒပြပွဲ ရဲများက အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲ
အဖွဲ့ဝင် မစ်ဂျက်ဂါ ဆေးကုသမှု ခံယူရသဖြင့် Rolling Stones တီးဝိုင်း၏ နယ်လှည့်ဖျော်ဖြေပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်း
အင်ဒိုနီးရှား ဆူမတြားကျွန်း၌ အမြင့် ၈ဝ၇၁ ပေရှိ ဆီနာဘွန်း မီးတောင်ပေါက်ကွဲ၍ ဒေသခံများကို သတ?